Manaratsy Ny Fiarahamonim-pirenena Ny Fanafihana Ireo Mpiaro ny Zon’olombelona — Sy Ny Fandrosoan’i Arabia Saodita · Global Voices teny Malagasy
Manaratsy Ny Fiarahamonim-pirenena Ny Fanafihana Ireo Mpiaro ny Zon'olombelona — Sy Ny Fandrosoan'i Arabia Saodita
Voadika ny 02 Janoary 2017 1:23 GMT
Manao veloma farany an'i Filoha Barack Obama tao amin'ny Lapan'i Erga tao Riyadh, Arabia Saodita, ny 27 Janoary 2015, ny Mpanjaka Salman bin Abdulaziz avy ao Arabia Saodita. (Sary Ofisialin'ny Trano Fotsy nalain'i Pete Souza)
Manana laza maharitra amin'ny fanitsakitsahana mitohy ny zon'olombelona i Arabia Saodita, fa na izany aza dia mpikambana ao anatin'ny Filankevitry Iraisam-Pirenena momba ny Zon'olombelona izy. Tamin'ny volana Oktobra 2016, voafidy indray ho mpikambana ao amin'ny Filankevitra ilay Fanjakana Golfa .
Tsy nanakana ireo manampahefana tsy hanao lasibatra sy hila vaniny amin'ireo mpikatroka mafàna fo amin'ny hetsik'izy ireo momba ny zony izany
Tamin'ny 18 Desambra, nosamborin'ny mpitandro ny filaminana i Issa al-Nukhaifil, mpiaro ny zon'olombelona sady mpikatroka ara-tsosialy ao amin'ny faritr'i Jizan (atsimo andrefan'i Arabia Saodita), miandry famotorana. Araka ny Foiben'ny Zon'olmbelona Golfa mifototra ao Beirut (GC4HR), voasambotra noho ny fikatrohany manohitra ny kolikoly sy ny fihetsiny anatin'ny aterineto izy. Tsy mazava tsara hoe iza tamin'ireo lahatsoratra no nampiasain'ny Manampahefana amin'ny Fanadihadiana sy ny Fanenjehana tao amin'ny renivohitr'i Jizan ho toy ny porofo hamelezana azy.
Mpampiasa Twitter mavitrika i Al-Nukhaifi miaraka amina mpanaraka mihoatra ny 42k. Misioka amin'ny lohahevitra isan-karazany izy, izay ahitana ny ady ao Siria , kolikoly sy fahantrana ao Arabia Saodita, ary ny fifindran'ireo fianakaviana monina ao amin'ny sisintany Saodiana-Yemenita noho ny antony ara-pandriampahalemana. Manohana ihany koa ny famoronana Parlemanta voafidy ao amin'ilay fanjakana mpifikitra amin'ny nentim-paharazana izy, izay manana mpikambana 150 ao amin'ny filankevitra, ny mpikambana rehetra ao dia tendren'ny mpanjaka avokoa.
Araka ny Fikambanana Saodiana-Eoropeana ho an'ny Zon'olombelona, tokony efa nosamborina noho ny fanohanana hetsi-panentanana mikendry ny famoronana ”parlemantam-bahoaka Saodiana ” ahitana mpikambana virtoaly 30 fidiana avy amin'ireo Saodiana mpanoratra, akademisiana sy mpikatroka izay ao amin'ny Twitter, i al-Nukhaifi. Efa faninefatra izao no nisamboran'ny manampahefana an'i al-Nukhaifi. Vao navotsotra tamin'ny volana Aprily 2016 izy rehefa nandalo telo taona sy valo volana tany am-ponja noho ny hetsika fiarovan-jo nataony.
Sarin'i Fadhel al-Shoulah sy ny zanany lahy. Sary nozarain'ny vadiny Hajar Al-Tarouti tao amin'ny Twitter.
Tany am-piandohan'ity volana ity, nampitomboin‘ny fitsarana manokana ao amin'ny renivohitr'i Riyadh ho sivy ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo taona ny sazy an-tranomaizin'i Isaa al-Hamid, mpikambana mpamorona sady Filoha fahiny tao amin'ny Fikambanana ho an'ny Zo Sivily sy Politika ao Arabia Saodita (ACPRA). Voaheloka tamina fiampangana maro izy izay ahitana ny ”famporisihana amin'ny fanakorontanana filaminam-bahoaka”, fandikàna ny lalàna manohitra ny fisolokiana amin'ny aterineto, ary fanompàna ny fitsarana sy ny vaomiera ara-pivavahana ambony indrindra ao amin'ny fanjakana.
Araka ny Amnistia Iraisam-pirenena, mifandray amin'ny fanambarana sy ireo lahatsoratra nozarain'i al-Hamid tamin'ny aterineto ny fiampangana azy, izay niresahany mikasika ny zo ho afaka hanao fihetsiketsehana ary ny filàna vaniny ataon'ny ministeran'ny atitany. amin'ny fianakavian'ireo gadra politika. Nitaky ny hanaovana fanadihadiana mikasika ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ihany koa izy.
Tamin'ny 6 Novambra, io fitsarana io ihany no nanasazy ilay mpikatroka ara-tsosialy sady mpanoratra tantara, Fadhel al-Soulah, handalo efatra taona an-tranomaizina ary miampy fanakanana mivezivezy mandritra ny efatra taona, tamin'ny niampangàny ny fanamelohana ho faty nomena ilay mpitondra fivavahana Shiita Nimr al-Nimr, izay novonoina vao haingana tamin'ity taona ity. Araka ny gazety Al-Quds Al-Arabi mifototra ao Londona, niampanga ny manampahefana Saodiana ho nampiely ny fotokevitra ”takfiri”; izay ny mpikambana dia manaraka fandikàna hentitra ny Silamo ary miaro fa ny Silamo izay tsy manaraka ny fandikàn'izy ireo ny hevitry ny ”mpivadika finoana” dia tokony hosaziana ho faty.
Nosamborina tamin'ny Desambra 2015 i Al-Shoulah. Fantatra amin'ny fikatrohany manohitra ny sekta sy ny fanavakavahana manoloana ireo Silamo Shiita ao Arabia Saodita izy, vondrona kely miisa eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 15 isan-jaton'ny mponina, izay ny ankamaroany dia mivangongo indrindra ao amin'ny faritany atsinanan'ny firenena. Ny orinasam-pamokarany, Qithara ho an'ny Famokaram-Baovao sy Fitsinjarana, dia namokatra sarimihetsika fohy maromaro, lahatsary miaina, ary sarimihetsika misongadina mikendry fanentanana isan-karazany eo amin'ny olana ara-tsosialy ahitana ny fanarahana sekta, fametavetana zaza ara-nofo, fiarovana ny rano, ary fanomezana fonenana ho an'ireo kamboty.
Raha naheno ianao hoe miatrika fitsaràna asa fampihorohoroana i Fadhel al-Shoulah, mpiaro ny firaisan-tsaina, fandriampahalemana sy fandeferana, fantaro fa enjehin'ny fitsarana Saodiana izy
Ny famoretana mitohy ny fikatrohana am-pilaminana ao Arabia Saodita dia hoe fotsiny manorotoro ireo fianakaviana sy tsy manome ireo mpikatroka ny fahalalahany sy ny zony fototra, fa manaisotra ihany koa tsy ho ao amin'ny firenena ny asa sy ny fahaizana mamoronan'ireo reformista mamirapiratra sy manan-talenta ao aminy toa an'i al-Shoulah sy ireo hafa maro.
Toy ny soratan‘ny mpanoratra, Ali Al Grash, ny fitsarana ”tsy rariny” manjo an'ireo mpikatroka ”tia tanindrazana, tia fihavanana sy tia mamorona” dia hanamafy fotsiny ny ”tsy fahatokian'ny olom-pirenena an'ireo andrim-panjakana”. Ao amina lahatsoratra Facebook hafa nozarainy tamin'ny 6 Novambra, nanoratra izy fa ny fanamelohana an'i al-Shoulah ” dia manamarina ny fiakaran'ny tsy fahampian'ny fahendrena sy ny firongatry fihizingizinan'ny manampahefana eo amin’ ny tsy firaharahiany ny ain'ny olombelona”, ao anatin'ny fotoana izay ilàn'ny ao Arabia Saodita ” ny firaisankina sy hetsika ho an'ny fanavaozana ankapobeny.”